संसद विघटन « Janata Samachar
Tag: संसद विघटन
काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ शुरु हुने वित्तिकै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल अधिवक्ता उभिएर बहस गर्ने ठाउँ (पोडियम) को दायाँपट्टि बसेर बहस सुनिरहने गर्नुहुन्थ्यो । तर बिहीवारको चिया ब्रेकपछि पुन:
कालो बेलुन उडाएर संसद विघटनको विरोध
संसद विघटनका विरुद्धमा बुधबार मोटरसाइकल र्याली निकालेको युवा संघले आज कालो बेलुन उडाएको हो ।
सन्दर्भ संसद विघटन : कसरी फेरिए डेढ वर्षअघिका सुवास नेम्वाङ ?
नरेश न्याैपाने काठमाडौं । यतिबेला २०७६ को साउन ४ गते धुलिखेलको एक कार्यक्रममा संसद विघटनबारे संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताएका संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बनेको छ ।
आज काँग्रेसको पालिकास्तरीय प्रदर्शन, कुन नेताकाे कहाँ सम्बोधन ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आज (शनिबार) प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देशभरका नगर तथा गाउँपालिकामा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिकु कदम भनेको काँग्रेसले
नेकपाका दुबै समूहको तानातानमा देउवा, कुन बाटो हिंड्लान ?
नरेश न्याैपाने काठमाडौं । जनताले झण्डै दुई तिहाइ जनमतका साथ सत्ताको शिखरमा चढाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएपछि स्थिरताको अपेक्षा गरिएको नेपाली राजनीतिले गन्तव्य बदलेको छ । जनताले भरोसा
किन रोजे प्रधानमन्त्रीले राजावादी वकिल ?
सरकारकै आग्रहमा आफू प्रधानमन्त्री ओलीको वकिल बन्न तयार रहेको भट्टराईको भनाइ छ ।
नरेश न्याैपाने काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचित प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक बाटोबाट विघटन गरेपछि मुलुकमा राजनीतिक अन्यौलता बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले आजको समयमा संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जानु
‘ओली कदम कुनै पनि बहानामा अदालतले सदर गर्नुहुन्न’
काठमाडौं । पूर्वसभामुख दमनाथ ढुंगानाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको कदमलाई कुनै पनि बहानामा अदालतले सदर गर्न नहुने बताउनुभएको छ । देशको संविधान नाघेर अदालतले फैसला गर्न नसक्ने
संसद विघटनविरुद्ध मोर्चाबन्दी बढ्दै, एक्लिँदै ओली ‘गुट’
नरेश न्याैपाने काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते हठातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए पछि त्यसको सर्वत्र विरोध बढेको छ । संसद विघटनको पक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
संसद विघटन किन गलत ? यस्ता छन्, पूर्वप्रधानन्यायाधीशका ६ तर्क
काठमाडौं । सरकारद्वारा जननिर्वाचित संसदको विघटन गरिएको विरोधमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संघीय संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय अहिले सदर हुने हो भने भविष्यमा कुनै